Rakhine State Supreme Court - သမိုင်းကြောင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် တရားရုံးများတွင် ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်တွင် အမြင့်ဆုံးတရားရုံး ဖြစ်ပါသည်။
ပထမ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲအပြီး ၁၈၂၄ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်အောက်သို့ ကျရောက်သွားသော ရခိုင်ပြည်တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရက ၁၈၂၆ ခုနှစ်၌ စစ်တွေမြို့ကို တည်ထောင်သည့်အခါမှစ၍ စစ်တွေမြို့သည် ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွင် ဒေသ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမြို့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
ဗြိတိသျှတို့သည် ရခိုင်တိုင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ခရိုင်မြို့များအဖြစ် စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ စသည့်မြို့များကို ခရိုင်မြို့အဖြစ် သတ်မှတ်တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းခရိုင်အဆင့် ရုံးစိုက်ရာမြို့များတွင် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာတို့ကို ဗြိတိသျှတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတိုင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြပါသည်။
စစ်တွေခရိုင်တွင် စစ်တွေ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်၊ ကျောက်တော်၊ မြို့ဟောင်း(မြောက်ဦး)၊ မင်းပြား၊ ပေါက်တောတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကျောက်ဖြူခရိုင်တွင် ကျောက်ဖြူ၊ မြေပုံ၊ ရမ်းဗြဲ၊ မာန်အောင်၊ အမ်းတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သံတွဲခရိုင်တွင် သံတွဲ၊ တောင်ကုတ်၊ ဂွတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ တည်ရှိသော မြို့နယ်အဆင့်(၁၇)မြို့သည် ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်ထက်မှစ၍ မြို့နယ်အဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့သော မြို့နယ်များဖြစ်ကြပါသည်။
ကိုလိုနီခေတ်နှင့် လွတ်လပ်ရေးပြီး ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမတိုင်မီ အချိန်ထိ စစ်တွေမြို့တွင် ခရိုင်တရားမနှင့် စက်ရှင်တရားသူကြီး (District and Sessions Judge)ကလည်းကောင်း၊ ခရိုင်မြို့များဖြစ်ကြသည့် ကျောက်ဖြူနှင့် သံတွဲမြို့များ၌ ရာဇဝတ် ခရိုင်တရားမနှင့် စက်ရှင်တရားသူကြီး (Additional District and Sessions Judge)များက လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်များတွင် မြို့နယ်တရားမတရားသူကြီး (Township Judge)၊ မြို့နယ် ရာဇဝတ်တရားသူကြီး (Township Magistrate)များက တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်နယ်တရားရုံးကို စစ်တွေမြို့တွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်(၁၇)ခုတွင် မြို့နယ်တရားရုံးများကိုလည်းကောင်း တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တရားရုံးတွင် ပြည်နယ်ပြည်သူ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ကို လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်တရားရုံးများတွင် မြို့နယ်ပြည်သူ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ကိုလည်းကောင်း ဖွဲ့စည်း၍ တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ နောက်ပိုင်း တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်တွင် ပြည်နယ်/တိုင်းအဆင့် နှင့် ခရိုင်အဆင့်များ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်တွေခရိုင်၊ ကျောက်ဖြူ ခရိုင်၊ သံတွဲခရိုင်၊ မောင်တော ခရိုင်အဖြစ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ စစ်တွေခရိုင်တွင် စစ်တွေ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရသေ့တောင်၊ ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦး၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ ပေါက်တောမြို့ တို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်ကို ကျောက်ဖြူ၊ ရမ်းဗြဲ၊ မာန်အောင်၊ အမ်းမြို့များဖြင့် လည်းကောင်း၊ သံတွဲခရိုင်ကို သံတွဲ၊ တောင်ကုတ်၊ ဂွမြို့တို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မောင်တော ခရိုင်ကို မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်မြို့တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ ပြည်နယ်အဆင့်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တရားရုံးကိုလည်းကောင်း၊ ခရိုင်အဆင့်တွင် ခရိုင်တရားရုံး(၄)ရုံးကို လည်း ကောင်း၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် မြို့နယ်တရားရုံး(၁၇)ရုံးကိုလည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်တရားရုံးတွင် ပြည်နယ်တရားသူကြီး၊ တွဲဖက်ပြည်နယ်တရားသူကြီး၊ ခရိုင်တရားရုံး များတွင် ခရိုင်တရားသူကြီး၊ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး၊ မြို့နယ်တရားရုံးများတွင် မြို့နယ် တရားသူကြီး၊ တွဲဖက်မြို့နယ်တရားသူကြီး၊ ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးအဖြစ် ရာထူးအဆင့် အလိုက် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးပြီး တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြည်ထောင်စု တရားစီရင်ရေးဥပဒေပြဌာန်း ချက်များနှင့်အညီ ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကို ၃၁-၃-၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ဦးကျောက်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးများအဖြစ် ဦးသိန်းအောင် နှင့် ဒေါ်စီစီ တို့ကို ခန့်ထားတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဒေါ်စီစီ သည် မိမိဆန္ဒအလျောက် ၂၂-၁၀-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် နုတ်ထွက်ခဲ့သဖြင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးအဖြစ် ဒေါ်စန်းစန်းရီ အား ထပ်မံခန့်ထားခဲ့၍ ၂၀-၁၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့မှစ၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဒေါ်စန်းစန်းရီ သည် မိမိဆန္ဒအလျောက် ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် နုတ်ထွက်ခဲ့သဖြင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးအဖြစ် ဒေါ်ဝါဝါထွန်း အား ခန့်အပ်၍ ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ် ဦးကျောက် သည် ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အသက် (၆၅)နှစ်ပြည့်မြောက်၍ ရာထူးမှ အနားယူခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ဒေါ်ဝါဝါထွန်း အား ခန့်အပ်၍ ၂၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ ယနေ့အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါသည်။
ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဦးသိန်းအောင် သည် မိမိဆန္ဒအလျောက် ၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် နုတ်ထွက်ခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တွင် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးများအဖြစ် ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင် နှင့် ဦးအောင်ထွန်းသိန်း တို့ကို ခန့်အပ်၍ ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ ယနေ့အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၃၁-၃-၂၀၁၁ ရက်နေ့၌ စစ်တွေခရိုင်ကို စစ်တွေ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ကျောက်တော၊ မြောက်ဦး၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ ပေါက်တောမြို့နယ်တို့ကို စစ်တွေခရိုင်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်ကို ကျောက်ဖြူ၊ ရမ်းဗြဲ၊ မာန်အောင်၊ အမ်းမြို့နယ်တို့ကို ကျောက်ဖြူခရိုင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ သံတွဲခရိုင်ကို သံတွဲ၊ တောင်ကုတ်၊ ဂွမြို့နယ်တို့ကို သံတွဲခရိုင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မောင်တောခရိုင်ကို မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် တို့ကို မောင်တောခရိုင်အဖြစ်လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ခရိုင်တရားရုံး(၄)ရုံးရှိခဲ့သော်လည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၄-၁၂-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအရ စစ်တွေ ခရိုင်ကို စစ်တွေ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရသေ့တောင် နှင့် ပေါက်တောမြို့နယ်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြောက်ဦးခရိုင်ကို မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား နှင့် မြေပုံမြို့နယ်များဖြင့်လည်းကောင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြောက်ဦးခရိုင်တရားရုံးကို ၁၂-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှစ၍ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ခရိုင်တရားရုံး(၅)ရုံးနှင့် မြို့နယ်တရားရုံး(၁၇)ရုံးတို့ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားရှိပါသည်။
စစ်တွေမြို့သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို (၂)ကြိမ်တိုင်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသဖြင့် ဂျပန်တပ် များနှင့် မဟာမိတ်တပ်များ၏ စစ်တွေမြို့သိမ်း တိုက်ပွဲများကြောင့် စစ်တွေမြို့၏ အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦ အများစုသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ပျက်စီးခဲ့ကြပါသည်။
လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်နှင့် စစ်တွေခရိုင်တရားရုံး၊ စစ်တွေမြို့နယ် တရားရုံး ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားသည့် အဆောက်အဦကို ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ခရိုင်တရားမနှင့် စက်ရှင်တရားရုံးအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ရုံးထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ အပေါ်ထပ်တွင် စက်ရှင် တရားသူကြီး ရုံးထိုင်ခဲ့ပြီး အောက်ထပ်တွင် မြို့နယ်တရားမတရားသူကြီးရုံးအဖြစ် အသုံးပြု ရုံးထိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ရာဇဝတ်တရားသူကြီးရုံးများမှာ လက်ရှိ ပြည်နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးတည်ရှိရာ ရုံးအဆောက်အဦ၌ ရုံးထိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ်မှစ၍ ၁၉၈၈ ခုနှစ် တပ်မတော်အစိုးရမတိုင်မီကာလတွင် ပြည်နယ် တရားရုံးအဆောက်အဦ၏ အပေါ်ထပ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တရားရုံးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ အောက်ထပ်တွင် စစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၃၁-၃-၂၀၁၁ ရက်နေ့ထိ အပေါ်ထပ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တရားရုံး၊ စစ်တွေခရိုင်တရားရုံး၊ အောက်ထပ်တွင် စစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်နယ်တရားရုံး အဆောက်အဦကို အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ တပ်မတော်အင်ဂျင်နီယာတပ်မှ အကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ရုံးအဖြစ် ၃၀-၃-၂၀၁၁ ခုနှစ် မှစ၍ ယနေ့တိုင် အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ စစ်တွေခရိုင်တရားရုံးနှင့် စစ်တွေမြို့နယ် တရားရုံးတို့ကို သီးခြားအဆောက်အဦများဖြင့် စီစဉ်နိုင်ခြင်းမရှိ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်တရား လွှတ်တော်၏ အောက်ထပ်တွင် ၎င်းရုံးများကို ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။
ကျောက်ဖြူခရိုင်တရားရုံးနှင့် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တရားရုံး ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အဆောက်အဦမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီ ဆောက်လုပ်ထားပြီး တရားရုံးအဖြစ် စဉ်ဆက် မပြတ် အသုံးပြုခဲ့သော ဌာနပိုင်အဆောက်အဦဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မောင်တော၊ သံတွဲနှင့် မြောက်ဦးခရိုင်တရားရုံးတို့မှာ တရား ဌာနပိုင် အဆောက်အဦများတွင် သီးခြားစီ ဖွင့်လှစ်ထားသော တရားရုံးများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် ပူးတွဲ ဖွင့်လှစ်ထားသော စစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံး၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် တရားရုံးမှအပ ကျန်မြို့နယ် တရားရုံး(၁၅)ရုံးတို့မှာ သီးခြားတရားရုံး အဆောက်အဦ များတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ရုံးများဖြစ်ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တို့တွင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တို့ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများ၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့်အညီ ဆောက်လုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်မှာ စစ်တွေခရိုင် တရားရုံး၊ စစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးများနှင့်အတူ အဆောက်အဦ တစ်ခုတည်းတွင် ဖွင့်လှစ် ထားရသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများ၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့်အညီ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် သင့်လျော်သော အကျယ်အဝန်းရှိသည့် မြေနေရာ ရရှိရန် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြထားပါသည်။ မြေနေရာရရှိက ရခိုင်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်ကို ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Copyright © 2019 High Court of Rakhine. All Rights Reserved.
Email : rakhine.hc@mptmail.net.mm